कोभिड–१९ : कस्तो अवस्थामा घरमा बस्ने ? कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने ? - Dainik Nepal
डा. रवीन्द्र पाण्डे/जनस्वास्थ्य विज्ञ २०७८ वैशाख २१ गते १३:४०
अहिले भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, अस्पतालको चाप, मृत्युदर तथा घाटका दृश्य देखेर हामीहरुलाई तनाब भएको छ ।
महामारीको समयमा यस्ता समाचार नहेर्नु उपयुक्त हुन्छ । हाल नेपालमा अक्सिजनको कमी भइसकेको छैन । सबै संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिने पनि हैन । आइसीयु तथा भेन्टिलेटर खाली नभएका समाचारले पनि असुरक्षा महशुस गराएका छन् ।
सरकारले अक्सिजन बेड, आइसीयु तथा कोभिड अस्पताल थपिरहेको छ । विपत्तिको समयमा डराउने र आत्तिने होइन, कुशलतापूर्वक अअघि बढ्नुपर्दछ । अहिले परिस्थिति २० प्रतिशत र हाम्रो मनस्थिति ८० प्रतिशत बिग्रेको छ ।
सञ्चारमाध्यमले पनि मनोबल बढाउने समाचार दिनु उपयुक्त हुन्छ । नकारात्मक समाचारको महामारी झनै घातक हुन्छ ।
ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद र गन्ध परिवर्तन हुने, पखाला लाग्ने, एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, खाना नरुच्ने आदि समस्या भएमा वा घरमा कुनै व्यक्तिलाई कोभिड भएमा वा कुनै कोभिड भएको व्यक्तिसँग भेटघाट गरेको भएमा तथा कतै यात्रा गरेको भएमा तुरुन्त पीसीआर टेस्ट गर्नुहोला ।
पीसीआर पोजिटिभ हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन । तापक्रम ९९.५ भन्दा माथि भएमा पारासिटामोल खान सकिन्छ । खोकी लागेमा एलर्जीको औषधि खान सकिन्छ । पखाला लागेमा प्रोबायोटिक खान सकिन्छ । जीवनजल पर्याप्त खानुपर्दछ ।
परिवारमा एकजना संक्रमित भएमा सबैलाई संक्रमण सरेको अवस्था छ । सबै संक्रमित भए पनि आत्तिनु पर्दैन । लक्षण अनुसारका सामान्य औषधिले अधिकांश संक्रमितलाई निको हुन्छ । कोभिडले १० दिन केहि न केहि गाह्रो हुनसक्छ । यसका लागि मानसिक तयारी र संयम आवश्यक हुन्छ ।
अक्सिजनको स्तर ९४ भन्दा माथि छ भने वा सास फेर्न गाह्रो भएको छैन भने कुनै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार घरमै उपचार गर्न सकिन्छ । अस्पताल जानु पर्दैन ।
अक्सिजन ९० भन्दा माथि छ भने घोप्टो परेर सुत्ने तथा कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा गएर छातीको एक्स रे गर्नुपर्दछ । त्यहाँ अक्सिजन, एक्सरे तथा जाँचबाट चिकित्सकले औषधि लेख्नुहुन्छ । त्यहि औषधि र सल्लाह अनुसार घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ ।
यदि अक्सिजनको स्तर ९० बाट तल झर्यो भने, सास फेर्न गाह्रो भयो, शरीर सिथिल भयो तथा खान नसक्ने अवस्था आयो भने तुरुन्तै कोभिड अस्पतालमा जानुपर्दछ । भरे वा भोलि जान्छु भनेर पर्खिनु हुँदैन ।
एक्सरे, सीटी स्क्यान आदिबाट तपाईलाई गम्भीर असर देखिएमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्दछ । अस्पताल भर्ना भएपछि आत्तिनु पर्दैन । तपाइँको अवस्था अनुसारको उपचार हुन्छ ।
अक्सिजन सिलिन्डर किनेर घरमा अक्सिजन लगाएर बस्नु घातक हुन्छ । अक्सिजनको स्तर घट्ने निमोनिया लगायत छातीको खराबीले हो । त्यसको उपचार र अक्सिजन सँगसँगै चिकित्सकको निगरानीमा गर्नुपर्दछ ।
संक्रमित हुँदैमा आइसीयु र भेन्टिलेटरको चिन्ता गर्नुपर्दैन । आइसीयु र भेन्टिलेटर प्याक हुने, खाली हुने क्रम चलिरहन्छ ।
सोर्सफोर्स लगाएर आइसीयु र भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो छ । खाली नभएसम्म धैर्यता गर्नुपर्दछ । आइसीयु वा भेन्टिलेटरबाट कुनै गम्भीर बिरामीलाई निकालेर अर्को व्यक्तिलाई राख्न मिल्दैन ।
केन्द्रका अस्पतालमा धेरै चाँप हुने भएकोले सहरबाट अलिकति बाहिरका मेडिकल कलेज वा अस्पतालमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यहाँ बिरामीको चाँप कम हुन्छ ।
काठमाडौ बाहिरका अस्पतालमा पनि उपचार राम्रो छ । तसर्थ आफ्नो ठाउँको अस्पताल छोडेर काठमाडौ आउनु जरुरी हुँदैन । उपचारको गाइडलाइन उही नै हो ।
आफुले उपचार गराएको अस्पतालमा आइसीयु वा भेन्टिलेटर छैन भने उक्त अस्पताललाई खाली भएको ठाउँ खोजेर पठाउन अनुरोध गर्नुपर्दछ । हामी आफैले खाली आइसीयु पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ । आइसीयु नपाए पनि चिकित्सक तथा नर्सको राम्रो केयर भयो भने अक्सिजन बेडमा पनि आइसीयु सरहको उपचार हुन्छ ।
अहिले पनि ८५ प्रतिशत संक्रमितलाई घरमै बसेर निको भएको छ । १५ प्रतिशतलाई अस्पतालको सुविधा आवश्यक देखिएको छ । ५ प्रतिशतलाई आइसीयुको आवश्यकता परेको छ । मृत्युदर १ प्रतिशत मात्र छ
समाचार हेरेर वा सुनेर आत्तिनु हुँदैन । मनोबल उच्च राख्नुपर्दछ । कोरोना लाग्दैमा मृत्यु हुदैन । पोषिलो खाना, हल्का व्यायाम, सकारात्मक सोंच, स्वस्थ जीवनशैली तथा योजनापूर्बक कदम चाल्ने हो भने अस्पताल जानुपर्दैन ।
सबैलाई थाहा नै छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने हो भने कोरोना संक्रमण सर्दैन ।
सर्वोच्चको आदेश प्रति एमालेले के भन्याे ?
सर्वोच्चको आदेशले गुम्यो यी २० मन्त्रीको पद
देउवा गुटका कमजोर दुश्मन
हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय
नेपाल प्रहरीका ५७ डीएसपी सरुवा (सूचीसहित)
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजद्वारा महासंघलाई अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर वितरण
नेपाल प्रहरीका ५२ एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे (सूचीसहित)
सिरहामा गुडिरहेको टिपरमा आगलागी
सिन्धुलीमा कुटपिटबाट मृत्यु, अभियुक्त पक्राउ
संसद विघटनको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाई सुरु
सुनको मूल्य ३ सयले घट्यो